I-WhatsApp Group Links - Dala, Yabelana futhi Uthumele - Komphakathi
I-WhatsApp messenger noma i-WhatsApp imane uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olusebenzisa i-inthanethi ukuvumela abasebenzisi bayo ukuthi bathumele imiyalezo ngemibhalo, izithombe, izitika, nama-GIF futhi kubiza okungaphansi kakhulu komlayezo wombhalo. Kuyo yonke iminyaka yokusebenza, i-WhatsApp ikhombise ukuthi iyashesha, ivikelekile futhi ithembekile. I-WhatsApp inyuse isisekelo sayo somsebenzisi ngezibuyekezo eziqhubekayo ku-a ukushaya abasebenzisi abayizigidi ezingama-68, nabasebenzisi abasebenzayo banyanga zonke abayi-2 billion . Iphethwe yisikhondlakhondla sezokuxhumana - uFacebook.
Amaqembu e-WhatsApp kanye Nesidingo sawo:
Amaqembu e-WhatsApp ayindlela enhle yokugcina abantu abaningi ngokwengeziwe benolwazi ngomsebenzi ngamunye. Ungabelana ngolwazi, futhi uthole okufakwayo okuvela kwabanye abasebenzisi eqenjini.
Amaqembu akhombisile ukuthi ayindlela ephumelelayo yabaninimabhizinisi ngokubasiza ukuthi bakhulise ibhizinisi labo futhi bafinyelele kumakhasimende amaningi. Kungaba ngumkhiqizo omusha esitolo sabo noma 'okokugqoka okufunwa ngumphakathi' okokugqoka, futhi abanikazi bamabhizinisi bamane nje bachofoza ekufinyeleleni kumakhasimende abo.
Inhloso eyinhloko yokuba namaqembu e-WhatsApp ukuqeda isidingo sokwabiwa kwemininingwane ephindaphindwayo umuntu ngamunye. Ekuqaleni, umuntu odala iqembu kuzofanela agcine izinombolo zabo bonke abantu afuna ukubangeza eqenjini. Kuthumele lokho, kuzodingeka ukuthi abangeze ngokulandelana.
Ufuna Ezinye izindlela ze-WhatsApp? Bheka esigabeni sethu sebhulogi.
Izixhumanisi Zeqembu le-WhatsApp:
Ukwenza ukwengeza amalungu eqenjini kube lula kakhulu, iWhatsApp yeza necebo eliqhakazile ‘lezixhumanisi zeqembu le-WhatsApp.’ Ukumema amalungu ukuthi ajoyine iqembu elisebenzisa isixhumanisi seqembu le-WhatsApp kunokunye okuhlanganayo:
Noma ngubani angajoyina iqembu lakho le-WhatsApp ngokuthepha nje / ngokuchofoza kusixhumanisi seqembu.
Akukho mvume yomlawuli edingekayo ukuze ujoyine iqembu.
Isidingo sokonga inombolo yomuntu ngaphambi kokuyengeza siyasuswa.
Uhlu lwezixhumanisi zakamuva zokumema ze-WhatsApp Group 2020:
IPUBG WhatsApp Group
Ezokuzijabulisa WhatsApp Group
Iqembu le-WhatsApp laseNdiya
I-USA WhatsApp Group
Iqembu leWhatsApp elihlekisayo
Inikeza i-WhatsApp Group
Izindaba WhatsApp Group
I-Shayari WhatsApp Group
I-Tik Tok WhatsApp Group
Funda i-WhatsApp Group
Iqembu Lomlilo Lamahhala leWhatsApp
Amantombazane WhatsApp Group
Ubuchwepheshe WhatsApp Group
Ubungani beqembu leWhatsApp
IKerala WhatsApp Group
Iqembu Lezinkondlo Kuphela
Dlala i-Pubg futhi uzuze iqembu lemali
Iqembu le-Bitcoin Mining
Iqembu le-Anime Fantasy
Iqembu leFreeFire Girls
Iqembu le-Pubg Akhawunti Yomthengisi
ILudo Star Group
Iqembu lezindawo zobungani
Kuphela Mexy Group
Imithetho Yeqembu leWhatsapp:
Wonke amaqembu neqembu kumele babe nemithetho embalwa. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uyabalandela futhi. Izosiza ekusebenzeni okushelelayo nokwabelana okulula kwemilayezo. Nayi eminye imithetho yeqembu esincoma abasebenzisi ukuthi bayilandele.
Gwema zonke izinhlobo zogaxekile eqenjini.
Kubalulekile ukugwema okuqukethwe kwabantu abadala ngamaqembu.
Ungaqinisekisa indawo ephephile.
Akudingeki kube nenqubomgomo eqinile yokulwa.
Abasebenzisi bangathumela imilayezo ehlobene nezihloko zeqembu kuphela.
Uma ungumlawuli weqembu, bese ulandela lezi zinqubomgomo. Izokusiza ngokuphuma kakhulu ekusetshenzisweni okulula.
Izinhlobo Zamaqembu e-WhatsApp:
Amaqembu omphakathi weWhatsApp aya ngokuya ethandwa kulezi zinsuku. Kufika kumalungu angama-200 + angajoyina iqembu.Lawa maqembu angaba ohlobo olulandelayo.
1. Amaqembu Okugembula
Amaqembu wemidlalo ayindlela enhle yokuxhumana nabanye abadlali bamageyimu. Ungabelana ngezintshisekelo zakho, iziqeshana zemidlalo, futhi ulayishe okuqukethwe.Kuyasiza futhi ukwakha imikhaya yemidlalo yeqembu efana ne-PUBG. Kungaba namaqembu ahlukene emiphakathini eyahlukene yokudlala.
2. Iqembu lemicimbi yasekolishi
Onke amadolobha amakhulu aneqembu elilodwa lasekolishi lesifunda sawo. Kuyasiza ukujoyina la maqembu ukuze uhlale usesikhathini. Sincoma abafundi bethu ukuthi babambe iqhaza kulawa maqembu ukuze bathole izinto zokufunda ezanele, baxhumane nabantu abasha, futhi bakhule.
3. Amakilabhu Abalandeli
Amaqembu wabalandeli aya ngokuya ithandwa kulezi zinsuku. Ungabona imiphakathi eminingi ye-WhatsApp yosaziwayo abehlukene, abasubathi, nokunye okuningi. Abantu abafuna ukuhlala besesikhathini ngenkanyezi abayithandayo bangajoyina iqembu elinjalo.
Ungabelana kanjani ngesixhumanisi seqembu le-WhatsApp?
Ukujoyina iqembu le-WhatsApp kusuka kusixhumanisi kungenziwa ngezinyathelo ezintathu ezilula noma ngabe ungumsebenzisi we-Android noma we-iPhone.
Qiniseka ukuthi ufake i-WhatsApp efonini yakho. Uma kungenjalo, yilande ku-Google Play Isitolo ku-Android noma ku-App Store eku-iPhone. Ngemuva kwalokho, dala i-akhawunti.
Thepha kusixhumanisi seqembu esithunyelwe kusimemo. Ikwazisa ukwethulwa kweWhatsApp efonini yakho. Ibonisa igama leqembu, umphathi weqembu, kanye nenani eliphelele lamalungu asevele enamalungu.
Thepha ku- 'Joyina Iqembu.'
Kuzokungeza eqenjini omenywe kulo ukuthi ujoyine. Ngenye indlela, ungamenywa ukuthi ujoyine iqembu usebenzisa ikhodi ye-QR. Abasebenzisi be-iPhone bangasebenzisa ikhamera yefoni yabo futhi bajoyine iqembu. Kodwa-ke, abasebenzisi be-Android kuzodingeka balande uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu kusuka ku-Google Play Isitolo ngokufanayo.
Ungasakha kanjani isixhumanisi se-WhatsApp Group?
Ungakha iqembu le-WhatsApp futhi wabelane ngesixhumanisi salo ngokulandela lezi zinyathelo:
Qalisa i-WhatsApp efonini yakho.
Ngakwesokudla phezulu, uzothola amachashazi amathathu. Thepha kuzo bese ukhetha inketho 'yeqembu elisha'.
Ngemuva kwalokho uzobhekiswa esikrinini lapho bonke oxhumana nabo bazokhonjiswa khona. Ungakhetha ukuthi ubani ofuna ukumngeza eqenjini lakho.
Ngemuva kwalokhu, kuzofanele unikeze igama elifanele kokuthunyelwe kweqembu lakho, okuzokwakhiwa iqembu lakho.
Umbuzo ovelayo lapha uthi, kuthiwani ngalabo abangekho koxhumana nabo. Ingabe nabo bangaba yingxenye yeqembu lakho? Yilapho izixhumanisi zeqembu le-WhatsApp zingena khona esithombeni.
Izinyathelo zokwabelana ngezixhumanisi ze-WhatsApp Group:
Qalisa i-WhatsApp efonini yakho bese uzulazula eqenjini elisesithombeni.
Thepha igama leqembu. Lesi sinyathelo sizokuholela esigabeni lapho kuzokhonjiswa khona izilungiselelo eziningi ezihlobene neqembu.
Skrolela phansi, uzobona amagama awo wonke amalungu eqembu. Ekugcineni, uzobona izinketho ezimbili: (1)Ngeza ababambiqhaza futhi (2) Mema ngesixhumanisi.
Lapho ukhetha 'ukumema ngesixhumanisi,' uzoba nenketho yekhophi, wabelane noma uthumele isixhumanisi ngeWhatsApp.
Uma ukopisha isixhumanisi sesimemo, ungasinamathisela kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza olufunayo. Kungaba ezinye izinhlelo zokusebenza zengxoxo, amakhasi ewebhu, njll.Ngokuchofoza inketho ethi 'Yabelana ngesixhumanisi', uzobona okuzivelelayo okuzokukhombisa izinhlelo zokusebenza ezifakiwe kufoni yakho, futhi ungabelana ngesixhumanisi kulawo mapulatifomu.
Ukubuyisa isixhumanisi seqembu:
Ake sithi wabelane ngesixhumanisi seqembu lakho kuzingxenyekazi eziningi. Manje ufuna ukumisa noma ngubani omunye umuntu ukuthi ajoyine iqembu lakho. Ukubuyisa isixhumanisi seqembu kuzokusiza ukwenza lokhu. Kuyindlela yokuvimbela ukungena okungafuneki eqenjini lakho. Ukuphela kokufanele ukwenze, landela lezi zinyathelo ezingenhla bese uthepha kusixhumanisi sokubuyisa.
Ngokwenza kanjalo, isixhumanisi owabelane ngaso ekuqaleni sizoyeka ukusebenza ngokushesha. Isixhumanisi esisha sesimemo sizotholakala ukuze wabelane ngaso ezikhathini ezizayo.
I-WhatsApp group link inciphise inqubo yokwengeza amalungu ngamaqembu. Izintshisekelo zabaphathi nabahlanganyeli beqembu zigcinwe engqondweni, ngakho-ke bobabili baneqoqo labo lenkululeko abangafinyelela kulo.
Abaphathi bangashintsha amasethingi eqembu futhi bashintshele kumodi ethi 'admin kuphela' lapho kungekho muntu ngaphandle kwama-admin kuphela abangathumela imiyalezo baze bayihlehlise. Okwamanje, wonke umuntu unenketho yokushintsha izilungiselelo zakhe ngokuya ngokuthi ngubani ongamengeza emaqenjini. Kunezindlela ezintathu kulokhu:
Engixhumana nabo ngaphandle kwabanye.